बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका, बसमै देखेर लभ पर्यो, केटी भन्छिन्- बोली र बानी मन पर्यो (भिडियो हेर्नुस) — newsparda.com
बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका, बसमै देखेर लभ पर्यो, केटी भन्छिन्- बोली र बानी मन पर्यो (भिडियो हेर्नुस)
११ बर्षको उमेरमा गरिवीले पिरोलेपछि काठमाडौंमा आएर अनेकौं सँघार्ष गरेका सुजनको जीवन कथाले सबैलाई रुवायो र उनको कलाले सबैको मन लोभ्यायो । सबैको माया पाएपछि शिशिरले पहिलो अन्तर्वार्तामै गरेको बाचा पुरा गरे । उनले सुजनको गीत रेकर्ड गराए र भिडियो सहित बजारमा ल्याए । अहिले गीतको चौतर्फी चर्चा छ ।
सबैले गीतको शव्द र सँगीत सँगै गायक गायिकाको आवाजको तारिफ गरेका छन् । सुजन सँगै रचना रिमालले गीत गाएकी छिन् भने शिशिर भण्डारी आफैले शव्द र सँगीत भरेका छन् ।
यसैबिच बस चालक सुजन बाबू गुरुङ भाईसँग बसमै शताव्दिकाको नजर जुद्छ, भाईको बोली र बानीले युवती मोहित हुन्छिन् र उनीहरु बिच प्रेम बस्छ । सधै गाडी चढ्ने क्रममा माया बढ्दै जान्छ । यो सुजन भाईको दोस्रो गीत ‘एक झल्को’को कथा हो । कसरी बस्छ प्रेम ? के उक्त प्रेम सफल हुन्छ ? गीतको छायाँकन कसरी भयो ? सुजनले हालसम्म कति गीत गाए ? सुजन र शताव्दिकासँगको कुराकानी हेर्नुस
भारतीय हस्तक्षेपको ओलीले विरोध गर्दा यी नेताहरु काम्दै भारत सामु लम्पसार परे (भिडियोसहित)
दिपशिखाको प्रश्न : हु ईज केपी ओली ? (भिडिओसहित)
भारतीय खे ताला हुन बाबुराम भट्टराई र गगन थापा – प्रमुख सचेतक पाण्डे
स्थिति जटिल भइसक्यो , एकठाऊँमा बस्न सकिन्न : ईश्वर पोखरेल …भिडियो